Inona no mampiavaka ny Qomo Wireless Interactive Keypads
Ny fifaneraserana an-dakilasy amin'ny fampiasana keypads tsy misy tariby dia nanampy ireo mpianatra hankasitraka sy hahatakatra bebe kokoa ny fitsipi-pikarakarana ara-pahasalamana hafa ao anatin'ny sehatry ny fampianarana interprofessional. Ny fampidirana ny teknolojia fanabeazana toy ny keypads tsy misy tariby dia heverina ho singa manan-danja amin'ny fahasalaman'ny bakalorea ...
Ity dia vaovao mahakasika ny fetim-pirenena Qomo China. Hanao fetim-pirenena any Sina isika manomboka ny 1 Oktobra ka hatramin'ny 7 Oktobra 2021. Raha misy fanontaniana na fanontaniana momba ny ecran touchy/camera document/webcam dia aza misalasala miantso mailaka: odm@qomo.com, ary whatsapp: 0086 182...
Qomo fakantsary antontan-taratasy QD3900H2 vaovao no navoaka
Izahay eto dia mampahafantatra ny mpanjifanay fa ny fakan-tsary antontan-taratasy Qomo QD3900H1 dia nijanona tsy namokatra. Ary notontosain'ny QD3900H2 Doc Cam. Raisinay ity fanapahan-kevitra ity mba hanesorana ny fakantsary antontan-taratasy QD3900H1, noho ny tsy fahampian'ny chip amin'ny teny manerantany. Na dia manana deduction aza ny QD3900H2, fa ...
Nahoana no malaza be ny fanalahidin'ny mpianatra Qomo QRF300C?
Ny rafitry ny valin'ny mpianatra dia niditra tao amin'ny efitrano fianarana K12 sy mpiara-miasa. Ny fanalahidin'ny mpianatra QRF300C Qomo dia manome fidirana ho an'ny efitrano fianarana marani-tsaina ao an-tsekoly. Andeha hojerentsika hoe nahoana no malaza amin'ny fampianarana sy ny fifidianana. Miaraka amin'ny Qomo QRF300C Student Response System azonao atao; Miarahaba antsika rehetra...